HomeWararka MaantaSoomaaliya oo iska Bixin Wayday Qaraankii Ka mid ahaanshaha Xubinimada Qaramada Midoobay
January 13, 2022 Wararka Maanta, Wararka Somaliya 0
Qaramada Midoobay warqad kasoo baxday 11-ka bishan Janaayo ee 2022-ka, ayaa lagu shaaciyay in 11-dal ay ku jirto Soomaaliya ay iska bixin waayeen Qaaraankii xubinnimada Qaramada Midoobay.
Dalalka ku midoobay Qaramada Midoobay ayaa laga qaadaa qaaraanka xubanimada, waxaana Soomaaliya safka hore kasoo gashay dalalka ku guuldareestay in ay bixiyaan qaaraanka halisna ugu jirta in laga saaro xubanimada Qaramada Midoobay.
Wadamadda aan bixin lacagta qaaraanka Qaramada Midoobay waxaa kamid ah Soomaaliya, Iran, Congo , Guinea ,Sudan ,Venezuela iyo wadamo kale ,kuwaa oo laga yaabo in ay waayaan xubanimada Qaramada Midoobay.
Madaxweynaha Soomaaliya Farmaajo ayaa dhawaan khudbad uu jeediyay ku sheegay in Soomaaliya meel sare gaartay intii uu xilka hayay , waxa uuna sheegay in Soomaaliya ay xubin ka noqoneyso golaha amaanka ee Qaramada Midoobay.
Soomaaliya ayaa lagu leeyahay lacag gaareysa 1,446,153 milyan oo dollar, waxaana horey Soomaaliya loogu ogolaaday inay codkooda ka dhiibtaan Golaha illaa dhamamadka kalfadhiga lix iyo todobaatanaad.